Aluminum Mobile Capsule, Mobile Capsule, fitoeran-javatra House ka nofonosiny House - AMC
Asa ivelan'ny trano Rooms
Product Features & Ny Lafitsara
Tamin'ny taona 2000
Ny voalohany eran-trano fitoeran-javatra VIRATY navoaka
Ny fifandonan'ny planeta eo fampisehoana aesthetics sy ny aluminium manomboka
Taorian'ny 10 taona
Aluminum Mobile Capsule
Nanorina izao tontolo izao voalohany aluminium foldable rehetra-trano ao Shina
Changzhou Aluminum Mobile Capsule no misy ao amin'ny "trano maitso-pirenena dia" hita ao Changzhou, afa-tsy ny 1 ora fiaran-dalamby ho any Shanghai. Isika no manerana izao tontolo izao ihany no mbola hanohon aluminium mpanorina trano. Manana ny orinasa maro aluminium firaka mbola hanohon trano famoronana Patents.
Ny vokatra mampiditra ny kely saina, mora ny vala, ny famolavolana hevitra mitsingevana, mandany ny fikarohana sy ny fampandrosoana sy ny famokarana ny trano fonenana vaovao tsara tarehy, ny vonjy taitra efitra, ny tontolo efitrano, ny toeram-pivarotana lehibe tsy misy olona sy ny sisa. Nampiasaina be teo amin'ny fanampiana vonjimaika, toby miaramila, toeram-panorenana, ho an'ny besinimaro ny varotra, ny fizahan-tany vakansy, ny toby, ben'ny tanàna trano vonjimaika, fisehoan-javatra goavana sy ara-barotra isan-karazany toy ny asa vonjimaika trano manodidina.
AMC handova ny mpanao asa tanana hatrany ny fanahy manan-tsaina fanorenana amin'ny fo, ka hahita ny hatsaran-tarehy ny aluminium dia ...